लिलाम: निम्नवर्गीय जीवनको उत्कृष्‍ट उपन्यास,(रजनी ढकाल)
“...नेपालमा खान पनि पाइन्न, बोल्न पनि पाइन्न । हामीलाई खान पनि पाइने, बोल्न पनि पाइने परिपाटी चाहिन्छ ।” (घिमिरे: २०६४) तत्कालीन पञ्चायती शासनकालको चरम अवस्थामा बाईस वर्षे युवा उमेरको जोसमा जगदीश घिमिरेको परिपक्व दिमागले बोलेको वाक्य हो यो । हो, यही खान र बोल्न नपाइने दासताका विरुद्ध युद्ध लड्ने सोचमा थिए जगदीश घिमिरे । तर साहित्यका माध्यमबाट यस्तै बलियो विचार घन्काउन उनी स फल भए लिलाम लेखेर । तर उनको लिलामको मूल पात्र बहादुरेले कुनै वर्ष पनि स्वास्नीलाई बाह्रै महिना ढिंडो पस्काउन सकेन । यो निम्नवर्गीय नेपाली समाजको यथार्थ हो । वि. सं. २०२४ सालतिर लेखिएको र वि. सं. २०२७ सालमा प्रकाशित यो उपन्यासको चर्चा नेपाली उपन्यासको इतिहासमा सामान्य रूपमा मात्रै हुनु जति दु:खलाग्दो छ, प्रगतिवादी समालोचनामा नसम्झिइनु उत्तिकै आपत्तिजनक छ ।
“छैन, नून छैन, काँको सितन हुनु ? खोर्सानी मात्तै छ । ई; म त बिर्सिराकी” लिलामकी बहादुरेकी स्वास्नी सेतीको संवाद हो यो । बल्लबल्ल पस्किन सकेको ढिंडोमा खोर्सानीको ढिँडी तेर्स्याउन सकेकोमा बहादुरेकी स्वास्नीको पीडाजन्य स्वाभिमान बोलेको छ । यी सीमान्तकृत जीवन बाँच्न विवश प्राणीहरू पनि आफ्नो स्वतन्त्र जीवनको सुख बाँच्न पाउँदैनन् । दु:खजिलो गरेर कमाएको एक गास पनि सन्तोषले खान सकेको छैन बहादुरेले । बहादुरेको दु:खी जीवनमा अझ बढी बेदना र दु:ख थपिएको छ, आफ्नो भएको घरबारी लिलाम हुने खबरले ।
“भोलि सर्वस्व लिलाम हुनेछ । अनि यो थाल हुनेछैन । यो भात हुनेछैन । यो पिर्का हुनेछैन । कुच्चिएको कचौरा, कोखा टालेको कसौंडी, भाँच्चिएको पुन्यूँ – केही पनि हुनेछैन । यो झुप्रो हुनेछैन । उसको धरतीको सुर्को हुनेछैन । केवल ऊ हुनेछ र उसलाई बाँच्ने हक हुनेछ, शान्तिप्रिय नेपाली नागरिकझैं । वरिपरि उसका जहान हुनेछन् – मास्तिर मुख फर्काएर कानसम्म मुख बाएका जुरेलीका कलिला भोका बचेराहरू जस्ता बालखहरू छोराछोरीहरू र यौटी झोक्राएकी पोथी – उसकी जहान ।” घिमिरेको आफ्नै खाले विशिष्‍ट भाषाले उपन्यासका पङ्‌क्ति पङ्‍‌क्तिमा बग्दै जान्छ पाठक । सम्पन्न घर परिवारमा हुर्केका घिमिरेले नेपाली जीवनको यस्तो निम्नवर्गीय पात्रको मनस्थितिको केस्रा केस्रा केलाउँदै गाउँले जीवनको सिङ्गो बिम्ब उपन्यासमा उतार्न सक्नु उनमा भएको विशिष्‍ट लेखकीय गुण नै प्रमुख कारण हो । समीक्षक नारायणबहादुर सिंहले भनेझैं घिमिरेले गाउँघरलाई साह्रै नजिकबाट हेरेका छन् । ‘बहादुरे’ सँग त जीवनको अधिकांश समय बिताएका छन् ।
आफूले र आफ्ना बाबुले समेत नखाएको ऋणको भारी बोक्नु परेको छ बहादुरेलाई । उसका बाबुले मर्ने बेलामा नभनेको पनि होइन –“रिन धन क्यै पनि छैन नानी... राम्ररी गरेर खाएस् ।” तर बाबु मरेको दुई वर्षपछि मात्रै आफू ऋणी भएको कुरो बहादुरेले थाहा पाउँछ । अनि उसले घोसेमुन्टो लगाएर ऋण स्वीकार्नु पर्छ । उसको बाबुले पाँच वर्षको मालपोत तिरेको हुँदैन । यही कुरालाई मुद्दा गर्दा गर्दा आखिर उसको हार हुन्छ । अनि अड्डाले तोकेअनुसार भोलि उसको लिलाम हुने भएको छ ।
आफ्नो सर्वस्व गुम्ने भएपछि बहादुरेका मनमा उत्पन्न विभिन्न तरङ्ग र तर्कना तथा उसका अनौठा क्रियाकलापमा सम्पूर्ण उपन्यासको कथानक बुनिएको छ । भोलि लिलाम भएपछि ऊ कहाँ जाने ? के खाने ? खाने बस्ने कुराको त केही ठेगान छैन छैन कोशी तरेर जाँदा माझीलाई तिर्ने पैसो पनि छैन ऊसँग । पाँच जनाको परिवारलाई धान्ने कुनै उपाय नभएको निर्दो बहादुरे त्यही रात तामाकोशीमा हामफालेर मर्न खोज्छ तर उसकी काखकी छोरीको च्यार्रले उसलाई रोक्छ । ऊभित्रको मानवीय मायाले सोच्छ, उसकी महिली र साँहिंली छोरीको के हालत होला ? सेतीले के गर्ली ? जति दायित्वबोध गरे पनि आर्थिक समस्याको खाडलमा जाकिएको बहादुरे केही गरे पनि उम्किन सक्दैन । यहाँनेर बहादुरेको स्थितिले बसाइँको धने बस्नेतलाई पनि सम्झाउँछ ।
भोलि लिलाम हुने भएको छ । यही कुराले रन्थनिएको छ बहादुरे । बारम्बार लिलाम शब्दले उसलाई नराम्ररी लडाउँछ । जति सम्झिन्छ, उति उसको मनमा हुन्डरी मच्चाउँछ । यही पीरले उसलाई हनहनी ज्वरो निकाल्छ । रातभरि उसका मनमा विभिन्न तर्कनाहरू ज्वारभाटा सरह आइरहन्छन् र उसको मनको धैर्यताको डिल भत्काउँदै भत्काउँदै लैजान्छन् । मनका विभिन्न तर्कना, स्मृति र आक्रोशमा मुछिंदा मुछिंदै ऊ घरको कुनामा थन्क्याइराखेको लठ्ठी समाउन पुग्छ । खुकुरीमा साँध लगाउन पुग्छ ।
भोलिपल्टको उज्यालोले उसलाई झन् पीडा दिन्छ । ऊ सेती र छोरीहरूलाई जङ्गलमा दाउरापात गर्न पठाउँछ । अनि छिमेकी हवल्दार्नी भाउजूकोमा गएर सक्तो रक्सी पिउँदै मात्तिन्छ । लिलाम गर्ने टोली घर आउने प्रतीक्षामा रहेको बहादुरेमा अनौठो आक्रोशको उन्माद भरिन्छ । घङारूको लौरोको वजनबाट ऊ विचित्र सन्तुष्‍टि प्राप्त गर्दै हुन्छ । उसले मार हान्ने खुकुरी पनि ठीक ठाउँमा राखेको हुन्छ । तर उसलाई आज बन्दुकको चाहना बढ्दै गएको छ । बाबुले जोडेको बन्दुक पनि भात खानको लागि बेच्नु परेको सम्झिन्छ । आफैंमा पछुताउँदै ऊ ‘मान्छे काटेको गौंडो’तिर लाग्छ । जङ्गल पठाएका स्वास्नी र छोरीहरूलाई सम्झिंदै ऊ मातेको शरीर लिएर लर्खराउँदै अगाडि बढ्छ ।
यही मूल कथानकमा बुनिएको लिलाम उपन्यास पम्फीको जीवनको उपकथानकले अझ रोचक बनेको छ । बिजुले दमाई र उसकी छोरी पम्फीको कथाले गाउँघरका शोषक, फटाहा र यौनपिपासुको चरित्रलाई छर्लङ्ग पारेको छ । मङ्गलध्वज र धनप्रसादको प्रतिद्वन्द्वितामा पिसिएका घुन हुन् बिजुले र उसकी छोरी पम्फी । कुमारी पम्फी गर्भवती भएपछि मङ्गलध्वज र धनप्रसादको दुश्मनी चर्किन्छ । तर पम्फीलाई एउटा निर्दोष गरिबको साथ लगाएर गाउँ कटाएपछि बिजुले उनीहरूको स्वार्थको गोटी बन्न पुगेको तीतो यथार्थ स्पष्‍ट हुन्छ ।
बहादुरेकी ठूली छोरी पोइल गइसकेकी छ । जेठो छोरो चाहिं भारत र चीनको लडाईँमा मारिएको छ । बालखैमा बिदेशिएको जेठो छोरोको ‘वीरगति’लाई अदना बहादुरेले कुनै तक्मा हो भनेर दङ्ग परेको थियो । चिठी पढ्नेले पछि मात्रै त्यसको अर्थ बुझाएपछि ऊ छाँगाबाट खसेझैं भएको थियो । मस्त तरुनी भएकी माहिली छोरीको बिहा गरिदिन सकेको छैन । ऊ सोच्छ, “माइली पनि पोइल गइसक्नु पर्ने।” तर माहिली न पोइल जान्छे न उसले चाहेअनुसार उसको बिहे गरिदिन सक्छ बहादुरे । सेतीसँग ठाकठुक पर्दा बहादुरेको अविभावकीय दायित्व त यसरी बोल्छ, “बढेकी चेली भन्दैमा कोशीमा बैता लाइदिनु पनि त हुँदैन त्यसै ।” तर आफ्नो आर्थिक कठिनाइले निचोरेको उसको मनले छोरी आफैं पोइल जाओस् भन्ने नै चाहिरहन्छ । बहादुरेको दायित्वबोधभन्दा उसको गरिबीको पहाड धेरै गुना अग्लो छ । बिपन्नताको तुषारोमा उसका जीवनका सम्पूर्ण सपनाहरू कहिल्यै अङ्कुराउन सक्दैनन् ।
पुसको चिसो दिनमा न बहादुरेको पेटमा तातो माड लागेको छ न आङमा लुगा ! एक धर्को लगौंटीले धानेको छ उसको इज्जत । भरपेट खान नपाएर सारङ्गी झैं भएको छ उसको पेट अनि अलि अघिल्तिर झुक्न थालेको छ उसको शरीर । जीउमा लगाएको फाटेको ज्वारीकोटले जाडो नथेगेपछि ऊ आफ्नो नाङ्गो र कालो कत्ला बसेको फुटेको जीउ हेर्दै मुङलानको होटलमा काम गर्ने आफ्नो साथी मानेको हिंउँजस्तो सेतो कमेज, पेन्ट र फेटा सम्झिन्छ । तर उसलाई जडौरीले कति पो धान्छ र ? “जडौरी पनि त एक दिन फाटिहाल्छ नि बरू आफ्नै छाला कहिल्यै फाट्दैन, फाटे पनि फेरि पलाइहाल्छ ।” गरिबीले थिलोथिलो पारेको जीवनको सङ्घर्षमा बहादुरेले गर्नुपरेको सम्झौता हो यो ।
बिग्रिएका जिन्दगीका पाना च्यातेर फेरि सुकिलो पानावाल जिन्दगी बिताउन खोज्ने प्रत्येक असफल व्यक्तिको पङ्‌क्तिमा उभिएको बहादुरेको जीवनको सपना भन्नु नै एक पेट खानु र एक झुम्रो लाउनु हो । उसले आफ्ना पुर्खाले झैं ज्याला, मजदुरी र खेती गरी जीवन निर्वाह गर्न चाह्‍यो तर ऋण र साहूको पञ्जाबाट कहिल्यै मुक्त हुन सकेन । हो, उसको सम्पत्तीको नाउँमा सात तेहेरको झुप्रो छ । पुर्खाले दिएको चिनो तीन मुरी माटो खेत छ अनि दुई हलको मेलो घरबारी छ । तर भोलि यी सबै चिजको लिलाम हुँदैछ ।
चेतनप्रवाह शैलीमा लेखिएको यस उपन्यासको घटनाक्रम जति झिनो छ यसको मूल पात्र बहादुरेको मनस्थितिको विश्‍लेषण उत्तिकै विशाल र सशक्त छ । बहादुरेको जीवनको नाजुक स्थितिले पाठकलाई बारम्बार उसको स्थिति र ऊप्रति सहानुभूति जागृत गराउँछ । बहादुरेको दु:खमा पाठकलाई सहभनुभूति गराउन सक्नु नै लेखकको सफलता देखिन्छ । “कोशी भेगको पहाडी जीवनको सामाजिक यथार्थता र घरबारी लिलाममा परेको अकिञ्चन परिवारको उद्वेजित मानसिक यथार्थ संचयन जीवित हुन दिन सक्नु नै उहाँ (लेखक) को सफलता भएको छ ।” (राई: २०३१)
“...आजको उपन्यासमा, आजको साहित्यमा जनसाधारणले बाँच्ने सङ्घर्षमा बगाएको पसिना गन्हाउनुपर्छ र त्यसको स्वागत गरिनुपर्छ ।” (घिमिरे: २०३४) भन्ने मान्यता राख्‍ने घिमिरेले यस उपन्यासमा पहाडी जीवनमा बाँच्ने गरेका थुप्रै बहादुरेहरूका कथा र व्यथालाई उधिनेका छन् । वास्तवमा “दलित, जनजाति, महिलासँग गाँसिएका मुक्तिका नयाँ प्रश्‍नहरू, सामाजिक न्यायका तर्कहरू, वर्गीय समानताको राजनीतिक आन्दोलन आदि विषयलाई समेट्नु नै अबको उपन्यासलेखनको वैचारिक एवम् कलात्मक चुनौती हो । ...अमेरिकी उपन्यासकार अलेजो कार्पेन्तियरले भने झैं एउटा कलाकारको रूपमा उसको दायित्व तबमात्र पूरा हुन्छ, जब ऊ आफ्नो देशका जनताको जीवनको सार्वभौमिक विशेषतालाई चिन्छ ।”(ढकाल: २०६१) यस मानेमा घिमिरेको लिलाम उपन्यास खरो उत्रिएको छ ।
“लिलामले मूलत: नेपाली समाजको जिउँदो अन्तविरोध र तस्बीरलाई विश्‍वासनीय ढङ्गले उतारेको छ । उपन्यासकार जगदीशले नेपाली समाजको गतिशील यथार्थलाई युगबोधको अन्तर्दृष्‍टिले टिप्नुभएको छ । ...निश्‍चय नै लिलाम नेपालीहरूको साँचो कथा हो र इतिहासबोधको जीवन्त गाथा ।” (ढकाल: २०६५) “कसरी र कत्तिको निर्ममतापूर्वक गरिबहरू सताइन्छन् भन्ने कुराको चित्रण यो उपन्यासमा पाइन्छ ।” (प्रधान: २०५२)
“बसाइँभन्दा लिलाम क्रान्तिकारी छ, बढी यथार्थ पनि । ...प्रगतिवादलाई नै आधार मान्ने अन्य लेखकको तुलनामा खगेन्द्र सङ्ग्रौलालाई जगदीशले सहजै उछिनेका छन् भने पारिजात र डी.पी. अधिकारीसँग उनी पाखुरा सुर्केर उभिएका छन् ।... (बन्धु: २०३५) विषयवस्तु, चरित्रचित्रण तथा भाषाशैली जुन कोणले हेरे पनि लिलाम उपन्यासको प्रगतिवादी पक्ष सशक्त छ । नेपाली कथा, नेपाली व्यथा, नेपाली समाज, नेपाली परिवेश र नेपाली ग्रामीण पात्रहरूको दु:खपूर्ण जीवनको जीवन्त प्रस्तुति हो लिलाम । समाजका निम्नवर्गीय पात्रप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै वर्गीय समानताका लागि शङ्खघोष गर्नु प्रगतिवादको मूल चुरो हो भने यो उपन्यास पनि निम्नवर्गीय जीवनको उच्चतम रचना हो । यस दृष्‍टिकोणबाट यो उपन्यासको अध्यनन र विश्‍लेषण हुनु अत्यन्त जरूरी छ ।
सन्दर्भ पुस्तक तथा लेखहरू :
· घिमिरे, जगदीश: अन्तर्मनको यात्रा, जगदीश घिमिरे प्रतिष्‍ठान, मन्थली, रामेछाप, नेपाल, २०६४ ।
· राई, इन्द्रबहादुर: नेपाली उपन्यासका आधारहरू, नेपाली साहित्य परिषद्, दार्जिलिङ, २०३१ ।
· घिमिरे, जगदीश: केही नेपाली उपन्यासहरू र युगबोध, रचना, दुई महिने साहित्य प्रकाशन, बैशाख-जेठ, वि.सं. २०३४ ।
· ढकाल, नारायण: नेपाली उपन्यासको बाटो, मूल्याङ्कन, कार्तिक, २०६१ ।
· ढकाल, नारायण: लिलाम: इतिहासबोधको जीवन्त दस्तावेज, लिलाम, जगदीश घिमिरे प्रतिष्‍ठान, मन्थली, रामेछाप, नेपाल, दो.सं. २०६५ ।
· बन्धु, खेम कोइराला: लिलाम, अभिव्यक्ति, पूर्णाङ्क १८, फागुन २०३५ ।
· प्रधान कृष्णचन्द्र सिंह: नेपाली उपन्यासका आधारहरू, ते.सं., ललितपुर: साझा प्रकाशन, २०५२ ।
· घिमिरे, जगदीश : लिलाम, जगदीश घिमिरे प्रतिष्‍ठान, मन्थली, रामेछाप, नेपाल, दो. सं. २०६५ ।